Osikapa ọ na-arụ ọrụ iji kpoo smartphone mmiri? | Gam akporosis
Osikapa ọ na-arụ ọrụ iji kpoo smartphone mmiri
O doro anya na ị nụtụla ya osikapa bụ ezigbo ihe ngwọta iji wepụ mmiri si na mmiri mgbochi mmiri. O yikarịrị ka ị jirila ya jiri mma ma ọ bụ njọ. Ma Ego ole ka eziokwu dị na akụkọ ole na ole?. Taa na Androidsis anyị ga-anwa ime ka ị kwụsị inwe obi abụọ ma kọwaa ụfọdụ ihe ị ga-ebu n'uche.
Ugbu a ọ na-esiwanye ike ịhụ smartphones nke na-enye nguzo mmiri na ahịa. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ na otu a, ị ga-enwe obi iru ala na mmiri mmiri, atụkwasịla ha niile obi. Tupu izu ike gị ama nso mmiri mmiri ijide n'aka na ihe ụdị «IP» asambodo ngwaọrụ nwere.
1 E nwere ụfọdụ kpam kpam irreparable mmiri mmiri mebiri
2 Ndụmọdụ bara uru ma ọ bụrụ na ama gị ama ama
E nwere ụfọdụ kpam kpam irreparable mmiri mmiri mebiri
Ọ bụrụ n’enyeghị gị smartphone ụfọdụ ụdị ihe nchebe megide mmiri mmiri, ị ga-ama ihe ole na ole. Ọ bụrụ n ’enwela isi ọma iburu ekwentị gị n’oké osimiri, ọ ga-enwe nnukwu nsogbu. Ihe ojoo banyere mmiri abughi mmiri kwa se, bụ na ọ nwere ike imebi ihe ndị dị mkpa maka ọrụ ya.
Mmiri mmiri, n'ihi pasent ya dị elu, na-ebibi ngwa ngwa ọbụna karị na akụrụngwa eletriki. Ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị karịa, ma ọ bụ karịa karịa splas splas, enwere ike ịnwe ya. Mmiri mmiri na-akpata mmebi kacha nta bụ mmiri n'onwe ya. Ihe ọụụ shuga, ma ọ bụ kọfị na mmiri ara ehi, nwere ike ịdị njọ karịa.
Mana ka anyị lekwasị anya na ịchekwa smartphone nke enwetara mmiri site na ọdachi. N'ime ha niile Njirimara osikapa iji banye mmiri mara. Ya mere, ruo ọtụtụ afọ ọ na-atụ aro iji ya ma ọ bụrụ na anyị ama e mebiri emebi site liquids. Tinye ya a mechiri emechi ite ma ọ bụ akpa na osikapa nwere ike ime ka anyị na ngwaọrụ naghachi ma rụọ ọrụ ọzọ.
Ọ bụ ezie na ịmara na osikapa anaghị arụ ọrụ ebube. Ọ bụ eziokwu na osikapa ga-akpọnwụ ngwaọrụ anyị Ọ bụrụ na akụrụngwa eletrik emebi emebi site na ịtọ ya mmiri, nke a agaghị abụ ihe ngwọta.. Ya mere, ọ na-egosi, osikapa nwere ike ime ka a mmiri smartphone ama na-arụ ọrụ ọzọ mgbe itinye. Mana ọ gaghị arụ ọrụ maka ikpe niile.
Ndụmọdụ bara uru ma ọ bụrụ na ama gị ama ama
Ihe mbụ ị kwesịrị ime, ọ bụrụ na ọ ka na-aga bụ ịgbanyụ ya ozugbo enwere ike. N'otu ụzọ ahụ, Ọ bụrụ na ị hụ na mgbe mmiri dere ya agbanyụrụ, agbanyela ya. Ọ bụrụ na ọ na-eme obere okirikiri anyị nwere ike gbaa motherboard ọkụ ma ọ bụ kpatara ụfọdụ mmebi nke anyị na-enweghị ike ịrụzi. Ee ị nwere ike wepụ batrị, mee ya. Ọzọkwa wepụ kaadị SIM na SD ma asi na enwerem ha.
N'otu oge kewapu iberibe niile ka o kwere mee kpoo ha. Ọ bụghị ihe amamihe dị na iji draya. Ọ bụrụ na anyị etinyekwu ọkụ karịa ka ọ dị mkpa, anyị nwere ike gbaa ma ọ bụ bido gbazee ihe mebiri emebi. Yabụ iji akwa, akwa nhicha ma ọ bụ akwụkwọ kichin ka mma.
Ma ugbu a, osikapa. Mgbe anyị kpọrọ nkụ n'akụkụ niile iche iche na ọ bụ oge maka osikapa. Kwesịrị a ite nwere mkpuchi ma ọ bụ akpa airtight. N'ụzọ dị otú a, nsị ahụ ga-adị ukwuu ma nsonaazụ ya ka mma. Ma oburu na anyi puru itinye ite ahu n’elu elu nke n’enye oku oku karie. Ọ bụ ihe ijuanya na ọrụ osikapa na-arụ na otu ọ ga-esi kpoo ngwaọrụ e tinyere na mmiri.
Ma Ogologo oge ole ka ị ga-ahapụ osikapa mmiri na osikapa?. Kwesịrị, iji nweta kacha larịị nke ihicha na- iri abụọ na anọ awa. A na-eche na n'oge ahụ, ọka osikapa na-enwe ike ịmị mmiri niile. Ma dị ka anyị na-ekwu, dabere n'ogo nke mmiri na mmiri mmiri, ị nwere ike ịgbake, ma ọ bụ na ọ bụghị, ama nke nwetara mmiri.
Mgbe usoro ndị a gasịrị, ị nwere ike idobe ihe niile n'ọnọdụ ya ma gafee mkpịsị aka gị. Oge eruola ka ọ gbanye ya. Ọ bụrụ na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri emebeghị mmebi ọzọ ọ ga-abụrịrị ụjọ. Yabụ ọ bụrụ na ịgbaso ndụmọdụ ndị a, ekwentị gị anaghị agbake, ọ ga-ejide n'aka na ọ nwere mbibi ka njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Osikapa ọ na-arụ ọrụ iji kpoo smartphone mmiri
N’iburu n’uche na mmiri na-eduzi ọkụ eletrik na mmiri ahụ nwere nnu ndị nwere ike ịnweta ma ọ bụ nke pere mpe, ma ọ bụrụ na emeghị obere oge mgbe mmiri mmiri, nnu nnu na-amalite ịgbanye ma mebie mmiri na egwu nke sekit. Ọ bụrụhaala na mmiri emetụbeghị ihe eletrọniki ọ bụla, a ga-echekwa ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụghị ya, ọbụlagodi na anyị kpochapụrụ ngwaọrụ ahụ kpamkpam, a ga-ama ya ikpe ma mee elu mee ala ọ ga-ada (mgbe ụbọchị ole na ole ma ọ bụ ọnwa gasịrị, dabere na nke Mpaghara mmiri dị). Ma abia na osikapa, nwamba ahihia di nma karie nmiri mmiri.
[APK] iRoot, otu esi gbanye Android mobile na-enweghị PC
Akwụkwọ Mpịakọta Okenye: Akụkọ Ochie, dị ugbu a na Playlọ Ahịa Play